अहिले यस्ती भइन् पारस शाह कि पूर्व प्रेमिका तस्बिरहरू हेर्नुहोस् - Hamro Abhiyan
अहिले यस्ती भइन् पारस शाह कि पूर्व प्रेमिका तस्बिरहरू हेर्नुहोस्
काठमाण्डौ : अहिले यस्ती भइन पारस शाह कि पूर्व प्रेमिका हेर्नुहोस् तस्बिरहरू : कुनै समय पूर्व युवराज पारस शाह कि पूर्व प्रेमिका कन्निका चाइयासर्नलेले आफ्नो फेसबुकबाट पारस शाह लाई आफ्नो श्रीमान् बताएपछि यो विषय ले नेपाली सञ्चारमाध्यम र मिडियाहरूमा एकदमै चर्चा चुल्लिएको थियो । थाइल्याण्ड कि युवती कन्निका चाइयासर्नले आफ्नो फेसबुकबाट एउटा फोटो रातो कलरको लुज टिसर्ट लगाएर बाइकमा बसेको फोटो राख्दै माई ह्ज्बेन्ड भनेर लेखेपछि युवराज पारस साहले थाइल्याण्डमै घर जम गरेको हल्ला पनि निकै भाइरल भएको थियो । पूर्व युवराज शाह कि पूर्व प्रेमिका अहिले कस्ती भइन त ? हामीले केही उनका तस्बिरहरू राखेका छौ तस्बिरहरू तल छन् हेर्नुहोस् ।
‘उनी त नेपालका युवराज हैनन् र’, फेसबुकमा एक जनाले सोध्दा उनले अंग्रेजीमा जवाफ दिएकी थिइन्, ‘नामको कसलाई मतलब छ र तर निराश भएर मलाई अंगाल्ने उनी नै हुन् ।’क्निकाले उक्त पोष्ट गर्नुअघि पारसले आफ्नो फेसबुकमा कन्निकालाई इंगित गर्दै ‘माइ वुमन’ लेखेका थिए । उनले लेखेका थिए ‘माइ वुमन कन्निका चाइयासर्नले नै म मर्न लागेको बेला मलाई अस्पताल लगेकी थिइन् । उनकै कारण म बाँचेको छु ।’थाइल्यान्डमा हुँदा पारस कन्निकासँगै बस्थिन् । बीचमा प्रेमिकाले धोका दिएको र आफूलाई पक्राएको भनेर पारसले फेसबुकमै लेखेपछि दुईजनाको सम्बन्ध बिग्रिएका समाचार आएका थिए । तर पछि पारसले सार्वजनिक रुपमा आफूले गल्ती बुझेको भन्दै माफी मागेका थिए ।लागू पदार्थ राखेको भन्दै थाइल्यान्डमा पटकपटक समातिएपछि उनी नेपाल फर्किएका थिए ।पूर्व युवराज पारस शाह अहिले भने परिवारसँग सार्वजनिक हुदैँ आएका छन् । उनी केहि समयअघि डेजाबु नाइट क्लबमा परिवारसँग देखिएका थिए । त्यसदिन त्यहाँ रहेका दर्शक पारसलाई भन्दा उनीसँगै आएका पाहुनालाई देखेर छक्क परेका थिए । ती थिए पारसका दुई छोरी र एक छोरा ।
विभिन्न नाइट क्लबमा उधूम मच्चाएको भनि विवादमा तानिइरहने पारस एक बाबुका रुपमा त्यहाँ प्रस्तुत भएका देखिन्थे ।पूर्वराज परिवारभित्र बाबु र छोरीछोराबीचको यो आत्मीयता सायद गोप्य नै रहन्थ्यो होला, डेजाबु क्लबले आफ्नो फेसबुक पेजमा उनीहरुको सामूहिक फोटो पोस्ट नगरेको भए ।सामान्यतया सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने पारस छोराछोरी हृदयेन्द्र, पूर्णिका र कृतिकासहित त्यहाँ पुगेका हुन् ।पारसले क्लबमा आफ्ना तीनै सन्तानसँग खिचाएको फोटो क्लबले पोस्ट गरेको हो। फोटोमा हृदयेन्द्र, पूर्णिका र कृतिकालाई ‘मोर्डन आउटफिट’ मा देखिएका छन् ।
पूर्णिकाले पूरा बाहुला भएको गाढा खरानी रङको टिसर्ट र थोरै ग्रन्च भएको कालो जिन्स लगाएकी छन् । एक हातमा हरियो चुरा र अर्कोमा बाला लगाएकी पूर्णिका फोटामा खुलेर मुस्काएकी देख्न सकिन्छ ।बहिनी कृतिका उनीभन्दा अलि आधुनिक पहिरनमा छिन् । उनी कालो क्रप टिसर्ट र रातो मिनिस्कर्टमा सजिएर त्यहाँ पुगेकी थिइन् । सानो सेतो ब्याग भिरेकी उनले हातमा सेतो ब्रासलेट र रातो नङपालिस लगाएकी छन् । उनको यो लुक्स सुहाउँदिलो देखिएको छ ।छोरा हृदयेन्द्र पनि ‘कूल’ देखिएका छन्, निलो सर्टभित्र खरानी रङको टिर्सटमा । घ्यू रङको पाइन्ट लगाएका उनले दिदीहरुका पछाडि बसेर फोटाको लागि पोज दिएका छन् । उनीसँगै कपाल र दाह्री पालेका पारस कालो कुर्तामा छोरालाई अँगालो मारेर उभिएका देख्न सकिन्छ ।
‘मोर्डन आउटफिट’ मा देखिएका पूर्वराजपरिवारको यो पुस्ता सधैं यस्तै स्वरुपमा भने देखिदैंनन् ।गत असार २३ गते आफ्ना हजुरबुवा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मोत्सव कार्यक्रममा उनीहरू योभन्दा बिल्कुलै फरकखाले कपडामा देखा परेका थिए ।क्लबमा टिसर्ट, जिन्स र मिनिस्कर्टमा देखिएका पूर्णिका र कृतिका सो जन्मोत्सव कार्यक्रममा कुर्तासुरूवालमा सजिएका थिए। दुवै जना फिक्का हरियो पूरा बाहुला भएको कुर्तामा मोतीको माला र सानो रातो टीका लगाएर उभिएका थिए, मुस्काउँदै ।दिदीहरुकै साथमा खरानी रङको कुर्ता र ढाका टोपीमा ठाँटिएर उभिएका थिए, हृदयेन्द्र। उनले कानमा सानो टल्किने टप र हातमा घडी लगाएका थिए ।
पारस र उनका सन्तान सँगै भने बस्दैनन्। पारिवारीक विवादका कारण पारस आफ्नो परिवारबाट अलग बस्दै आएका छन् । पारसका बुवा ज्ञानेन्द्र, आमा कोमल र पत्नी हिमानीका साथै उनका तीन सन्तान निर्मल निवासमै बसिरहेका छन् । पारस भने आफ्नी फुपू शोभा शाहीका छोरा विकास शाहीको घर सुनाकोठीमा बस्छन् ।थाइल्याण्डबाट फर्केर आएदेखि नै उनी परिवारदेखि अलग बस्दै आएका हुन् । आफ्ना छोरीछोरीसँग पारिवारीक जमघट र सार्वजनिक कार्यक्रममा भने उनी देखा पर्दै आएका छन् ।
राजा बन्ने आकांक्षा छैन
पूर्व युवराज पारस शाहले नेपालको राजा बन्ने आकांक्षा आफूमा नभएको बताएका थिए । फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।‘म राजा बन्न वा कसैमाथि शासन गर्न चाहन्न । यो कुरा मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हुँ र फेरि एकपटक प्रष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘म केवल देशलाई पुन ठीक बाटोमा ल्याउन चाहन्छु ।’ देशलाई ठीक बाटोमा ल्याउन आफूलाई युवा पुस्ता आवश्यक परेको उनको भनाई छ । पुरानो पुस्ताले गर्दा देशको हालत बिग्रेको पनि उनले दावी गरेका छन् ।
‘मेरो काम भनेको युवा पुस्तावलाई देश जिम्मा लगाउनु हो,’ उनले लेखेका छन् । धेरैले उनको स्टाटसलाई समर्थन गर्दै प्रतिक्रिया लेखेका छन् ।अभागि पारस ! (सूर्य खड्काद्धारा लिखित): २०५८ जेठ १९ गते शुक्रबार तत्कालिन नारायणहिटी राजदरबारमा प्रजाबत्सल राजा बीरेन्द्रको वंश विनास गरिएपछिको आजसम्मको नेपालको समय चक्रलाई एक जुग मानिदिने हो भने, यस जुगका एक अभागी नागरिक हुन् पारस शाह । संसारमा, जीवनमा पारसले तत्कालिन युवराज दीपेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई मात्रै पिता, इश्वर, दोस्त, मान्थे तर उनकै आँखा सामु दीपेन्द्रमाथि वंशविनासकको दाग मात्रै लागेन, दीपेन्द्र स्वयंको जीवनलिला सदाका लागि समाप्त भयो । त्यो त्रु्कर, नाटकीय र विभत्स हत्याकाण्डको प्रत्यक्षदर्शी र भुक्तभोगी भैरहदा शाहज्यादा रहेका पारसले दीपेन्द्रपछिको जीवनमा सर्वाधिक एक्लोपनाको अनुभूति गर्दथे ।
इतिहासको जीवित साक्षी पारसले पाएको युवराजको उपाधि दीपेन्द्रको अपुतालि थिएन न त त्यो उनको इच्छित प्राप्ति नै थियो । तत्कालिन सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन शाहवंशीय राजपरम्पराको निरन्तरता धानिदिनुपर्ने निरीह पात्रका रुपमा पारस बनाइएका थिए– युवराज । संविधानसभाको प्रथम बैठकले उनलाई बनाएको पूर्व युवराज पनि त्यस्तै एक कागताली परिणाम थियो अस्थिर नेपाली राजनीतिको ।खासमा पारस एक विन्दास नवयुवक हुन्। उनी एक आम मानिस मात्रै हुन् । उनले जीवनमा पाएका भनिएका सबै उपमाहरु समयका अकल्पनीय उदाहरणहरु मात्रै थिए । वडो विचित्र इमेजमा चित्रित गरिए पारस । यस मानेमा पनि उनी निकै अभागी हुन्। राजखान्दानको युवकलाई हत्यारा समेतको रुपमा प्रस्तुत गरियो। खासगरी संगीतकार प्रविण गुरुङको मृत्युमा उनलाई हत्यारा प्रमाणित गर्न तत्कालिन प्रेस, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठनहरुले जो जो, जे जे, जसो जसो गरे त्यो सब अभागी पुर्पुरोको परिणाम थियो–
पारसको जीवनमा । पारसले गल्ती त स्वीकारेकै हुन्, दर सबै दुर्घटनामा, तर दुर्घटनाहरु भवितव्य हुन्थे, नियतबस हुदैनथे । तथापी एकांकी रुपमा पारसलाई उडाउन मात्रै हाम्रा मिडियाहरु लाग्थे । मानवीय संवेदना, कमजोरी वा भावनाहरुबाट पारस पनि अछुतो छैन नि भन्ने कोणबाट कुनै खबरहरु नआउँदा पारस साँच्चै बढी विछिप्त बन्थे, तथापि प्रतिबादको साटो मौनता र बैकल्पिक खुशीमा चल्थे। एउटा कठोर सत्य के हो भने कसैले पारसलाई भेट्ने, बुझ्नेसम्म जाँगर नगरी उनीमाथि अन्याय गरे । तथापि अभागी पारस बाँची नै रहे आफ्नै शैलीमा ।
जीवनमा धेरै आलोचकहरुसँग बरु सहमत भए तर आफ्ना पिताको शासकीय महत्वाकांक्षा र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सदैब विमति राखे पारसले । २०६१ माघ १९ गते उनले डा. तुलसी गिरीलाई अस्वीकार गरेथे। एउटा अविश्वसनीय कटु इतिहास हो– आफ्ना पिता सक्रिय शासक राजा बन्दा युवराज पारस नै पिताको शासनशैलीका कटु आलोचक रहे । तर यो पक्षमा पारसको ख्याल गर्ने न त मिडिया रहे न त अन्य अन्य पक्षहरु नै । सक्रिय सत्ताका निस्त्र्किय युवराजको विमति केबल पुरानापात्रले हुँदैन भन्ने थियो पितासँग। भलै त्यो हारेको सत्ता इतिहास भैसकेपनि पारसको हकमा दुर्भाग्यपूर्ण घडी रह्यो। सायद शासकीय सत्ताको अभागी पात्र उनी शिवाय अरु विरलै होलान् कम्तीमा हामी कहाँ ।
पछिल्लो पटक सुजाता ज्वाई रुबेल चौधरीमाथिको बन्दुक फायरिङ मामलामा सार्वजनिक मुद्दा खेपेका पारसले आफ्नै बुतामा आफूलाई जोगाएका थिए। आकाशतिर थुक्दा आफ्नै मुखमा परे झैं भएको थियो सुजाता एण्ड रुबेल कम्पनी कमाण्डलाई। दिन नै बिग्रेका पारसका बारेमा बीरलै राम्रा खबर आए, छाए। तर वास्तवमै पारस निकै मिलनसार भद्र र आटिला शाही परिवारका एक सदस्य, अझ भनौं एक आम नेपाली हुन्। उनले पत्नि, छोराछोरी वा परिवारजनप्रति देखाउने स्नेह, प्यार वा दायित्वप्रति जोकोही बेमतलब रहे, तर पारस हिमानी पारपाचुकेका कहानीहरु धेरै मिथक बने। जो देखाइयो त्यो होइन, पारस। कुरो साँच्चो हो पितासँग भने उनको कहिल्यै ठ्याक मिलेन। तर, असल मान्छेका रुपमा पारसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नराखी खुइल्याउने हाम्रो नेपाली चलनका शिकार हुनबाट कहिल्यै छुटाइएनन् पारस ।
देशभर लालपूर्जा वा बैंक व्यालेसरहित जीवन बाँचेका पारसको जीवनशैली आम नकारात्मक इमेज बनाइएजस्तो कुलिन र सौखिन रहेन। सम्पत्ति नै उनका शुभेच्छुक रहे। उनका लागि बन्दुक, सन्दुक, सम्पत्ति, प्यार दिने लाखौं शुभेच्छुक अद्यापी छन्– देशभर, देशबाहिर पनि।पारस पछिल्लो दिनमा असुरक्षित थिए भन्ने मिडियाहरुको खबरप्रति कम्तिमा डा. बाबुराम जस्ता क्रान्तिकारी सरकार प्रमुखको प्राथमिकतामा नपर्नु अस्वाभाविक थिएन। तर, कहिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय आपराधिक गिरोहसँग जोडेर, कहिले छिमेकी दक्षिणका खुफिया एजेन्सीहरुको मनगढन्ते रिपोटहरुलाई आधार मानेर गणतन्त्र नेपालमा उदाउँदो छवि बनाउँदै गरेका पारसलाई खुइल्याउने क्रममा पूर्ण्विराम लगाइएन। अरु कसैलाई हानी नोक्सानी नपुर्याेइकन आफ्नो मर्जीमा मात्रै हैन हाम्रो प्रवृत्तिबाट पारसले पाठ सिक्दै थिए।
जीवन संघर्ष एउटा नागरिकका रुपमा गर्दागर्दै हर्टअट्याकमा परेका पारस बाँच्दैमा वा नबाच्दैमा नेपालमा ठूलो परिवर्तन आउने वा रोकिने होइन। तर, शाहवंशीय सत्ताका हिमायतीहरुका हकमा उनको पुर्नजीवन उर्जा बन्नसक्ला। एउटा सिक्काका दुईपाटा झै पारसका जीवनका असल पक्षहरुलाई पनि आत्मसात गर्ने कोशिस गर्ने हो भने नेपाली युवा पुस्ताका लागि दुस्प्रचार गरिएभन्दा धेरै प्रेरक युवाप्रवृत्तिका पात्र हुन् पारस । खेल्न, पिउन, डुल्न, घुम्न र नजिककाहरुसँग अन्तरंग हुन रुचाउने पारसले खासगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरक्षकका रुपमा खेलेको भूमिका अहिलेका शासकको भन्दा अब्बल छ । हेर्नुहोस उनका तस्बिरहरु